U beddel sawirka pdf: tabaha lagu sameeyo waxyaabo kale | Abuurista khadka tooska ah
Weligaa ma soo martay baahida loo qabo in sawir loo beddelo PDF? Ma ogtahay haddii la samayn karo? Mararka qaar, markaad sameysid infogram, ama garaaf oo aad ubaahantahay inaad kula wadaagto qaab "xirfadle" ah, waxaad ubaahantahay sawirkaas in loo badalo PDF.
Laakiin, Sidee sawir loogu beddelaa PDF? Ma jiraan barnaamijyo mise waa la qaban karaa iyada oo aan wax la rakibayo ama aan wax la soo gelin internetka. Maanta waxaan ka hadleynaa tan waxaanan ku siin doonnaa xalka wax walba.
1 Waa maxay feyl muuqaal ah
2 Waa maxay PDF
3 Sida sawir loogu beddelo PDF
3.1 U beddel sawir PDF-ga oo leh tifaftire qoraal ah
3.2 U rogo sawir PDF ah barnaamijka tafatirka sawirka
3.3 U beddel PDF khadka tooska ah
Waa maxay feyl muuqaal ah
Sawir, ama feyl feyl ah, waa a qaab ay ku keydsan tahay xogta dhijitaalka ah ee sawirka tanna waxaa lagu heli karaa qaabab kala duwan, tan ugu wanaagsan ee la yaqaanna waa JPEG (ama JPG), GIF, PNG, WebP (hadda) ...
Si kale haddii loo dhigo, waxaan ka hadlaynaa qaab lagu aqoonsaday inuu sawir ku jiro oo, sidaas oo kale, loo matalayo. Kuwaani waxaa lagu furi karaa barnaamijyo badan.
Waa maxay PDF
Dhinaceeda, pdf waa soo gaabinta waxa loo yaqaan Qaabka Dukumintiga La Qaadan Karo, ama Qaabka Dukumentiga La Qaadan Karo. Sida magaceedaba ka muuqata, waa nooc dukumiinti ah oo elektiroonig ahaan loogu soo bandhigo.
Fue waxaa soo saaray Adobe oo hadda waxay noqotay mid ka mid ah kuwa ugu habboon dirista iyo daawashada dukumiintiyada xirfadeed, maaddaama ay ku siineyso naqshad iyo qaabeyn ku habboon adeegsi kasta, laga bilaabo soo bandhigida resumey ama shaqo, si loo dejiyo buugga iyo inuu ku habboon yahay daabacaadda. .
Sida sawir loogu beddelo PDF
Hadda oo aad ogtahay mid kasta oo ka mid ah ereyada uu tilmaamayo, iyo inaad si cad u tahay farqiga u dhexeeya midka iyo kan kale, waxaa la joogaa waqtigii la ogaan lahaa sida sawir loogu beddelo PDF.
Tan awgeed, waxaa jira xulashooyin kala duwan oo laga kala xusho. Tusaale ahaan, waad awoodaa ku samee tifaftiraha qoraalka, barnaamijka tafatirka sawirka ama xitaa internetka.
Si aan ku siino fursado dhowr ah, aan ka hadalno mid kasta oo ka mid ah.
U beddel sawir PDF-ga oo leh tifaftire qoraal ah
Maanta tifaftirayaasha qoraalka ee aadka loo isticmaalay, marka lagu daro Ereyga, waa Qoraa LibreOffice iyo OpenOffice. Dhamaantood waxay aad ugu egyihiin howlgalkooda, sidaa darteed waxay u badan tahay in talaabooyinka aan tilmaameyno inay isku mid yihiin dhamaantood.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa fur dukumiinti maran qoraalka qoraalka. Kadib guji Geli / Sawirka. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka raadsato kombuyuutarka sawirka aad rabto inaad geliso, kaasoo noqon lahaa kan aad rabto inaad u beddelatid PDF.
Markaad heysato, waxa caadiga ah waa inuu la jaan qaado cabirka bogga Ereyga, taasi waa, cabirka A 4 laakiin waad beddeli kartaa taas ka hor oo waxaad dhigi kartaa qaabab bogag kala duwan ah si boggu ugu soo baxo siyaabo kala duwan iyo waa, sawirka aad abuurtay.
Taas ka dib, waa la keydin doonaa oo kaliya, laakiin sidaad ogtahay, qaababka asalka ah waa qoraal, taas oo ah, ama .doc ama .odt. Si aad u bedesho, halkii aad wax ku badbaadin lahayd, waa inaad wax u bixisaa sidii. Sidaas ayaad ku badali kartaa qaabka.
Hadda waxaa lagaa doonayaa oo keliya inaad hesho qaabka PDF-ka ah, u bixi magac ugu dambaynna guji kaydinta .. Adiguna waxaad ku heli lahayd PDF.
U rogo sawir PDF ah barnaamijka tafatirka sawirka
Xulashada xigta ee aan soo jeedineyno ayaa ah tan u rogo sawir PDF ah barnaamij sawir ah, taasi waa, iyada oo loo marayo barnaamijyada sida Photoshop, GIMP, iwm.
Intooda badan intooda badani waxay kuu oggolaanayaan inaad wax ku duubato qaabab kala duwan, midkoodna PDF, sidaa darteed dhibaato badan kuma lahaan doontid.
Laakiin sidee u sameysaa? Feejignaan:
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad furto barnaamijka sawirka ah ee aad haysato. Ku dhowaad dhammaantood waa isku mid marka laga hadlayo amarrada sidaa darteed dhib kuma lahaan doontid inaad na raacdo.
Markaad furto, waa inaad gujisaa furitaanka si aad uhesho sawirka aad rabto inaad ubadasho PDF barnaamijka. Ikhtiyaar kale oo aad haysataa waa inaad furto galka halka uu ku yaal sawirka, ku dheji calaamadda sawirka oo guji badhanka midigta ku yaal (midka bidix haddii aad bidix tahay). Halkaas waa inaad riixdo si aad ula furto ... waxaadna heli doontaa magaca barnaamijka tafatirka sawirka. Tani waxay u soo diri doontaa sawirka barnaamijka.
Horaad ugu haysatay barnaamijka. Oo hadda waxaad u baahan tahay inaad u beddelatid sawirka PDF. Si tan loo sameeyo waa inaad tagtaa si aad u keydiso sida ... Xaaladdan oo kale, waxaad heli doontaa dhowr qaab oo muuqaal ah: jpg, gif, png ... laakiin sidoo kale waxaad heli kartaa PDF. Taasi waa meesha aad riixeyso.
Ka dib markaad ansaxiso astaamaha soo socda ee PDF, waxaad ku diyaarin doontaa kombiyuutarkaaga, waxaadna u diri kartaa qofka aad rabto ama waxaad ugu isticmaali kartaa dukumiinti xirfadeed wixii aad u baahato.
U beddel PDF khadka tooska ah
Haddii aadan rabin inaad adeegsato tifaftiraha qoraalka, ma lihid barnaamijyo tafatirka sawirrada oo taageeraya qaabka PDF, ama waxaad dooneysaa inaad ku sameyso khadka tooska ah ee internetka oo aadan walwal gelin, sidoo kale waxaa jira xulashooyin badan oo aad kala dooran karto.
Xaqiiqdii, waxaa jira kumanaan bog ah si sawir loogu beddelo PDF, sidaa awgeed talladayada ayaa ah:
Geedi socodka dhammaantood waa isku mid. Ku billow adigoo soo gelinaya sawirka aad rabto inaad u rogo. Marka la rakibo, badalku wuxuu bilaabmayaa ilbidhiqsiyo gudahood wuxuu kuu ogolaanayaa inaad kala soo baxdo PDF-ka sawirkaas adoon ku sii dheerayn.
Hadda, Marka ay tahay dukumiinti aad muhiim u ah, iyo wixii ka sarreeya oo dhan oo gaar loo leeyahay oo ay ku jirto xog ay tahay inaad ilaaliso, kuma talineyno inaad adeegsato qaabkan Sababtoo ah waxaad macluumaadka ku dhejin kartaa sawirka halista (inkasta oo bogagga ay xaqiijinayaan nabadgelyada, daqiiqadda aad soo gelisay waxaad lumineysaa xakameynta waxa lagu sameyn karo sawirkaas).
Muuqaal kale oo ay tahay inaad tixgeliso markaad adeegsanayso qaabkan ayaa ah, xaaladaha badankood, waxaad u baahan doontaa sawirka si aad uhesho qaab jpg maxaa yeelay waa midka ugu badan ee la beddelo. Xaaladaha qaarkood, pngs ayaa sidoo kale kuu oggolaan doona inaad iyaga beddelo. Laakiin qaabab kale oo muuqaal ah waxaad la kulmi doontaa dhibaatooyin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tricks » U beddel sawirka pdf
Tifatiraha sawirada bilaashka ah ee kombiyuutarka